Ahoana ny fomba fanaovana cropping haingana ao amin'ny Photoshop? | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba fanaovana cropping haingana ao amin'ny Photoshop?
Ny fahaizana manapaha sy mamorona asa Fepetra takiana fototra isaky ny mpamorona ary matetika izy io no mamorona ny hazondamosin'ny asan'ny Photoshop azonao omena.
1 Karazan-tsivana fototra 3 hanaovana fanapahana haingana
1.1 Tongasoa majika
1.2 Loko isan-karazany
Karazan-tsivana fototra 3 hanaovana fanapahana haingana
Amin'ity lahatsoratra ity dia handeha hamaky fitakiana fototra telo izahay hamoronana safidy hafa ary amin'ny manaraka manarona safidy sosona makiazy ary ny fomba fiasan'izy ireo bebe kokoa amin'ny halaliny. Raha vantany vao mifamatotra tsara amin'ny fototra ianao dia hahita tontolo iray manontolo amin'ny fahafaha-mamorona mamorona amin'ny Photoshop.
La wand mágica no haingana indrindra ary angamba ny fomba tsotra indrindra ahafahana mifantina tsotra ao anatin'ny Photoshop. Ny sary dia matetika vita amin'ny fotsy fotsy, ka ny Wand M.ágica dia fitaovana tonga lafatra amin'ity asa ity.
Mizaha ao amin'ny fitaovana Magic Wand ary ampitomboy amin'ny 30 ny fandeferana ary kitiho ny faritra fotsy hisafidianana.
Tsindrio izao ny shift + cmd + I hampiodina ny safidinao ary avy eo tsindrio ny bokotra "Manampia saron-tava”Eo amin'ny farany ambanin'ny takelaka fisoratana mba esorinao eo afara.
Rehefa mijery ny ao ambadiky ny fampisehoana sary isika dia afaka mahita fa ny aloka dia tsy nopetahany takelaka avy any aoriana, ka ho an'ny safidy marina kokoa dia tsy misy fitaovana tsara kokoa noho ny fitaovan'ny Pencil.
Safidio ny fitaovana ary manomboka manindry, mitazona sy misintona azy hamorona patio sy “Fiolahana Bézier”Mandra-pifaliana anao dia tsindrio ny teboka amin'ilay kinova voalohany hanidiana ny patio. Mandehana amin'ny takelaka farany amin'ny patio, cmd + tsindrio ny patio izay noforoninao ary hatao tsara ny safidy.
Ny fitaovana isan-karazany loko dia fitaovana tsotra manokana ary úny misafidy faritra lehibe kokoa izay misy faritra mitovy loko.
Mandehana fotsiny amin'ny alàlan'ny menio fifantina ary kitiho izany mba hampisehoana ny tontonana misy ny loko. Sakano izao ny sarinao ary ho hitanao fa miseho ny masomaso maso. Tsindrio ny faritra tianao anaovana sary voafantina ary ho hitanao ny fomba ao anatiny, hiova ny tontonana
Raha vantany vao tonga tompon'ny fifantina sy ny sarontava, mora be ny mamorona vokatra mahafinaritra maro toy ny manjelanjelatra manjelanjelatra amin'ny sarin'ny telefaona napetrakay tao amin'ny fandrakofana ambony ary ny famoronana an'io vokatra io dia tsy maintsy misafidy ny telefaona ianao rehefa esorinao ilay izy.
Ankehitriny, amina sosona vaovao, fenoy fotsy ny fisafidianana ny loko ary avy eo, manaova paozoro miolakolaka, miaraka amin'ilay fitaovana pensilihazo. Hampiasaintsika ity mamorona fahatsapanaómamirapiratra mafy amin'ny telefaonaételefaona.
Raha vantany vao nopotsohinao ny faritra mamirapiratra dia azonao atao ny manova ny opacity mba hisy vokany misimisy ary mampiasa borosy malefaka sy malefaka hanitsiana ny saron-tava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba fanaovana cropping haingana ao amin'ny Photoshop?
Gon Her dia hoy izy:
Na iza na iza dia manao na mampianatra sary nohetezana amin'ny lafiny fotsy. YouTube dia feno tutorial. Fa rehefa miresaka sary mahazatra izay tena te hamoaka ny mombamomba azy amin'ny fampiharana dia tsy misy fampianarana. Izy rehetra dia manome azy ireo amin'ny maha-mpamorona azy nefa misy mifanohitra lavitra aminy. Ka na ny zanako aza misy tsindry tokana dia manao izany.
Valio i Gon Her
Gon Her raha tena misy ny video nakariny ny fomba fanaovany azy
Rahoviana no ilaina ny toro-lalana?